नेपालमाथि चीनको अघोषित नाकाबन्दी कहिलेसम्म ? - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ३ असार २०७९, शुक्रबार १९:४७
कृष्ण तिमिल्सिना :
नेपाललाई ‘भूमिजोड’ राष्ट्र घोषणा गरेको चिनियाँ सरकारको लगातारको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको छ ।
नेपाल–चीन व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरुले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दीका कारण आफ्नो व्यापारमा करोडौंको नोक्सानी बेहोरेको बताएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार चीनले अहिले पनि विभिन्न बहाना बनाएर तातोपानी र केरुङ नाकाबाट नेपाली ट्रकलाई पहिलेजस्तै अनुमति दिएको छैन ।
नेपाल हिमालयन क्रस बोर्डर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठका अनुसार तातोपानी र केरुङ दुवै नाकाबाट अविरल सामान आयात गर्ने सिजन सकिएको कारण बर्खामा बाढी र पहिरोका कारण सीमा नाका अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
हाल चिनियाँ अधिकारीले नेपालतर्फ लडाइएका कपडा र अन्य सामान ढुवानीमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
सन् २०१९ को अन्त्यतिर वुहानमा देखिएको कोभिड–१९ का कारण नेपालसँगको व्यापारमा विभिन्न प्रतिबन्धका कारण असर परेको छ ।
२०७६ सालमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले उक्त नाकाको उद्घाटन गरेका थिए ।
त्यसबेलादेखि, सम्पूर्ण विश्व कोरोनाभाइरस महामारीबाट मुक्त भएको छ र लगभग सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू खुला छन्।
तर, नेपाल–चीन सीमामा चीनले लगाएको प्रतिबन्ध र निगरानी भने यथावत रहेको छ ।
कोभिड नियन्त्रणको नाममा दुई वर्षदेखि सीमाना पूर्णरुपमा बन्द गरेको चीनले यसअघि २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द गरेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय न केरुङ नाका न त तातोपानी नाकामा सुचारु आवतजावत हुन सकेको छैन ।
फलस्वरूप लाखौंको एलसी खोलेर नेपाली व्यापारीले किनेका सामान बोक्ने कन्टेनर चीनका विभिन्न सहरमा महिनौंदेखि रोकिएका छन् ।
अवरुद्ध भएको हवाई सेवा चीनमा क्रमशः सुचारु भएको छ । यस परिवेशमा हिमालयन क्रस बोर्डर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले अब व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
झण्डै साढे दुई वर्षदेखि नेपालमा अलपत्र परेका विद्यार्थी फर्किन थालेका छन् ।
तर, चीनतर्फका दुवै भन्सार नाका खराब मौसमका कारण अनुकुल बनेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘चिनियाँ अधिकारीहरू हाम्रो सरकारसँग वार्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पहल प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।
उनका अनुसार चिनियाँ पक्षको नियतमा समस्या छ ।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि चिनियाँ पक्षले मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याएको तातोपानी भन्सार नाका अहिले पनि सुचारु हुन नसकेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
तर, सयौं कन्टेनर राजमार्गको बायाँ र दायाँ छेउमा रोकिएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बेधबहादुर श्रेष्ठका अनुसार चिनियाँ सरकारले करोडौंको लागतमा निर्माण गरेको लार्चाको सुख्खा बन्दरगाह तातोपानी नाका नियमित नहुँदा प्रयोगविहीन बनेको छ ।
तातोपानी नाकाको अवस्था पनि फरक छैन, अहिले केरुङसम्म कन्टेनर आउन महिनौं लाग्ने श्रेष्ठले बताए ।
भूकम्पका बेला केरुङ नाकाबाट केही तेल ट्याङ्कर नेपाल प्रवेश गरेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
सन् २०१५ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि पनि चीनबाट सबै सामान भित्रिने प्रतीकात्मक सन्देश दिने चिनियाँ अधिकारी द्विपक्षीय व्यापारको कुरा गर्दा सधैं संकीर्ण छन् ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले सीमा समस्या समाधानका लागि चिनियाँ पक्षसँग वार्ता गर्न आफूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गरेको बताए ।
अहिले देशमा डलरको सञ्चिति घटेको छ । नेपाली व्यवसायीले करोडौंको एलसी खोलेर सामान अर्डर गरेका छन् ।
तर, सामान आउन महिनौं लाग्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
बस्नेतले तातोपानी भन्सार नाकामा पनि रासायनिक मल रोकिएको बताउँदै मल अभावले नेपालमा किसान मर्कामा परेको बताए ।
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं २ का सांसद एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तातोपानी नाकालाई सहज बनाउन र सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पहल गरेको तर समस्या अझै समाधान हुन नसकेको बताए ।
तातोपानी नाका उद्घाटनका क्रममा चिनियाँ उप वाणिज्यमन्त्री झाङ सियाङचेनले नेपाल–चीन व्यापार सुचारु हुने आश्वासन दिएका थिए ।
यो समस्या समाधानका लागि परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्दा पनि यो विषय उठेको थियो ।
रसुवाको केरुङमा पनि यस्तै समस्या रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
यसअघि त्यहाँबाट दैनिक १७ कन्टेनर भित्र्याउने गरेको थियो । तर अहिले सातवटा कन्टेनर मात्रै नेपाल भित्रिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा तातोपानी भन्सार कार्यालयले रु। द्द।डघ बिलियन।
त्यसैगरी केही महिनाअघि एलसी खुलेपछि नेपाली व्यवसायीले बोकेका सामानहरु कोटा प्रणालीका कारण ग्वाङ्जाओमा अलपत्र परेका छन् ।
नमस्ते यातायातका सञ्चालक दानर्बु शेर्पाले करिब रु ५० लाख घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँछन् । चीनबाट सामान ल्याउन नसक्दा दैनिक ४० हजार
विसं २०७२ देखि तातोपानीमा मात्रै सामान आयात गर्दै आएको र रासायनिक मल नेपाली बजारमा ल्याउने जिम्मा पाएको सिल्क ट्रान्सपोर्टले चीनको अवरोधका कारण सम्झौताअनुसार मल ल्याउन सकेको छैन ।
विगतमा सयौं कन्टेनर प्रवेश गर्ने तातोपानी नाकाबाट अहिले करिब १० कन्टेनर नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् ।
उत्तरी सीमाना विश्वास गुमाएको छ
नेपाल हिमालयन क्रस बोर्डर चेम्बर अफ कमर्सका अनुसार चिनियाँ अधिकारीले नेपालसँगको सीमामा निगरानी थालेपछि ठूलो संख्यामा व्यापारीले भारतीय बन्दरगाह कलकत्ता हुँदै व्यापार गर्न थालेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवागढी नाका दुवै समस्याग्रस्त छन् ।
सरकारले चीनविरुद्ध निर्णायक कारबाही नगरे तातोपानी र रसुवागढी नाका बन्द हुने भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान महासचिव यादव दाहालले लार्चाको बन्द सुक्खा बन्दरगाह पनि बन्द गरिने बताए ।
चीनतर्फका दुवै नाका सञ्चालनमा नआएकाले नेपाली व्यापारीले चर्को भाडा तिरेर भारत हुँदै सामान आयात गरिरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा चीनबाट २ खर्ब २६ अर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको छ ।
यी सबै तातोपानी र केरुङ नाका हुँदै आएको भए राजस्व सङ्कलन बढ्ने थियो ।
करिब २० प्रतिशत मालसामान स्थलमार्गबाट ​​आएको छ । चीनका अन्य सहरबाट आयात भएका सामान समुद्री मार्गबाट ​​भारत पुगेर नेपाल भित्रिएका छन् ।
नेपाल–चीन भन्सार नाकाबाट हुने कारोबारलाई सहज बनाउन नेपाली व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् ।
तर, चिनियाँ अधिकारीहरूले सकारात्मक भनेका छैनन्। जसका कारण अत्यन्त सुस्त बन्दै गएको नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै एउटा कन्टेनर नेपाल ल्याउन झण्डै ३ हजार डलर बढी लाग्छ र त्यो पनि ३ महिनामा ।
र, नेपालसँगको सीमामा अघोषित नाकाबन्दी गर्ने चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरूले साझा समृद्धिको लागि बीआरआई परियोजनालाई बढावा दिइरहेका छन् ।
जुन १० मा, चीनको सरकारी स्वामित्वको रेडियो स्टेशन चाइना रेडियो इन्टरनेशनलले आफ्नो फेसबुक पेजमा एउटा तस्बिर पोस्ट गर्‍योस् पूर्वाधारदेखि दिमागसम्म जोडेर ूद्यच्क्ष्ू बाट साझा समृद्धिको द्रुत ट्रयाक निर्माण गर्दै।
केही दिनअघि चीनको सिचुआन प्रान्तको चेङ्दु अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे बन्दरगाहबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु र विद्युतीय सामानले भरिएको पहिलो दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय रेल काठमाडौंतर्फ प्रस्थान गरेको थियो।
रेल तिब्बतको चिलोङ बन्दरगाहमा पुगेपछि राजमार्गबाट ​​कन्टेनर ढुवानीद्वारा कार्गो गन्तव्यमा पु¥याउनेछ ।
रेल(राजमार्ग संयुक्त यातायातको यो मोडले पहिलेको परम्परागत यातायात र समुद्री यातायातको तुलनामा करिब २० दिन बचत गर्नेछ। यो अझै पनि एक प्रभावकारी र छिटो यातायात च्यानल हो।
चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमले दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे सञ्चालनको बारेमा रिपोर्ट गरेको यो पहिलो पटक होइन।
यसअघि भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीका बेला पनि यस्तै तस्बिर र समाचार आएका थिए ।
मे २२, २०२० मा पनि चिनियाँहरूले पहिलो दक्षिण एसियाली मालबाहक रेल पालो साङ्सी प्रान्तको सियान सहरबाट काठमाडौंसम्म चलेको भन्दै भ्रम फैलाए।
विभिन्न देशलाई साझा समृद्धिको अवसर दिने दाबी गर्दै चीनले नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रलाई लज्जित बनाउँदै आएको छ ।
यस वर्षको पछिल्लो चार महिनामा जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र कोभिड महामारीका बाबजुद चीन र बेल्ट एन्ड रोड वरपरका देशहरूबीच कुल आयात निर्यात ३ अर्ब ९० करोड ७० अर्ब युआन पुगेको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा चीनले आफ्नो आर्थिक कारोबार १५ दशमलव ४ प्रतिशतले बढाउँदै नेपालसँगको सीमानामा भ्रम मात्र देखाएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ ।
नेपालसँगको सिमानाको तस्विर हेर्दा चीनले नेपाललाई पूर्वाधारमार्फत बाहिरी विश्वसँग जोड्ने वाचा गर्दै नेपाली व्यापारी र जनताको मन लगातार भाँचिरहेको छ ।
साभार : खबर हब अनलाइन
नेपाल-चीन व्यापार: चिनियाँ पक्षले नाका नियन्त्रण गर्दा सामान आयातमा अझै भारतको भर
चीन सरकारले अत्यन्त सङ्क्रामक कोभिड नियन्त्रणको बहाना बनाउँदै नेपाली नाकामा आवतजावत ठप्प बनायो । जतिजति
गोरखाबाट हज गर्न २ जना जाँदै, आवेदन दिएका पाँच जना जान पाएनन्
साउदी अरबको मक्कामदिनामा हज गर्न गोरखाबाट दुई जना जाने भएका छन् । कोभिड १९ को
गोरखामा पनि खुल्यो ‘जापान जाने बाटो’
नेपालका विभिन्न सहरमा सञ्चालित फ्रि जापानी भाषा र भिसा उपलब्ध गराउने भिक्टोरी निहोन एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी
चीनको सहयोग कोषको मोडल : नेताहरूको गृह नगरले बढी रकम पाउँछ,
,चिनियाँ पूर्वाधार लगानी र विदेशी परियोजनाहरू आक्रामक रूपमा खाँचोमा परेका राष्ट्रहरूमा बेइजिङको चासो विस्तार गर्न